အသုံးပြုမှုမူဝါဒစည်းမျဉ်းများ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
ကျေးဇူးပြု။ ဖတ်ပါ! မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် requires consideration for and asacondition of allowing your use of https://www.visitmyanmar.com.au.
ဒီ site အားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်သင်ခညျြနှောငျလုပျဆောငျဖို့အပြည့်အဝလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကိုယ်စားပြု, မည်သည့်တတိယပါတီ, ကုမ္ပဏီ, သို့မဟုတ်တရားဝင် entity, နှင့်သင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ကြောင်း, အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်လက်, ဆိုက်သည်သင်၏ဖတ်ပါနှင့်သဘောတူညီခဲ့အသုံးပြုမှုဤသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်ကျနော်တို့ site ပေါ်တွင် post စေခြင်းငှါအခြားအသဘောတူညီချက်များဘဲလျက်ရှိပါသည်အတူ.
ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်, လာရောက်လည်ပတ်, သုံးပြီး, သို့မဟုတ်နှင့်အတူအပြန်အလှန် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် သို့မဟုတ်မည်သည့်နဖူးစည်းစာတန်းနှင့်အတူ, ပေါ်လာသည်, ကပေါ်ပေါ်လာသို့မဟုတ်ကြော်ငြာ, သငျသညျသုံးစှဲမူဝါဒနှင့်များ၏ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒ၏ဤဝေါဟာရများကိုအပေါငျးတို့သပြဋ္ဌာန်းချက်ဖို့သဘောတူကြသည် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်.
မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် အထူးသားသမီးရဲ့အွန်လိုင်း privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြောင်းမည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီမှဝင်ရောက်ခွင့်ငြင်းဆို (ခွက်) ၏ 1998.
မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် မည်သည့်အရာကိုပြုသင့်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုသူမှဝင်ရောက်ခွင့်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. အဆိုပါသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာ, အရာကိုသင်ကြည့်ရှုများအတွက်အခွအေနေအဖြစ်ကိုလက်ခံ, www.damaccountingservices.com.au ဖယ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်များစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုအတွက်ဒေတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းစတိုးဆိုင်မှခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
အသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်၏ဤဝေါဟာရများကိုအချိန်ဖို့အချိန်ကနေပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်. ဧည့်သည်တစ်ဦးမှအတည်ပြုထောက်ခံတာဝန်ရှိ, access ကိုမှခွင့်ပြုချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်, အသုံးပြုမှုစာမျက်နှာ၏ဤဝေါဟာရများကိုသူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုအသိပေးသူတို့ကိုယ်သူတို့စောင့်ရှောက်ရန် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်.
ဧည့်သည်များ, ကြည့်ရှု, အသုံးပြုသူများသည်, subscriber များအား, အဖွဲ့ဝင်, affiliates, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ, စုပေါင်းလာရောက်လည်ပတ်သူများ "အဖြစ်ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်း,"ဒီသဘောတူညီချက်မှပါတီများဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်များနှင့် / သို့မဟုတ်အော်ပရေတာကဒီသဘောတူညီချက်မှပါတီများဖြစ်ကြသည်, ဤနေရာတွင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း "ဝဘ်ဆိုဒ်။ "
ဒီနည်းကို website ကနေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုမှု
သငျသညျဆန့်ကျင်ရန်ဤ website ကိုအတူတစ်ဦးအမြန်စာဖြင့်ရေးသားစာချုပ်သို့ဝငျပါပွီမဟုတ်လျှင်, ဧည့်သည်များ, ကြည့်ရှု, subscriber များအား, အဖွဲ့ဝင်, affiliates, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူ setting ကိုအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့အဘယ်သူမျှမပိုင်ခွင့်ရှိသည်; သူတို့ကထုတ်လွှင့်ရန်မပိုင်ခွင့်ရှိသည်, က copy, မကယ်, က print ထုတ်, ရောင်း, သို့မဟုတ်ဤ website ၏အကြောင်းအရာမဆိုဝေမျှထုတ်ဝေရန်. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ contents ကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျလက်လှမ်း၏ဤအခွအေနေရန်သဘောတူနှင့်သင်မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းကိုဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောဖြစ်ပြီးလူထုအခြေပြုသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များရန်သင့်အားလက်အောက်ခံစေခြင်းငှါဝန်ခံ. တစျဖနျ, ဧည့်သည်များ၏ content ကိုအသုံးပြုရန်သမျှမျှအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်, ၎င်းသို့မဟုတ်ဝေမျှ, ယင်း၏ databases ကိုအပါအဝင်, မမြင်ရတဲ့စာမကျြနှာ, နှင့်ဆက်စပ်စာမျက်နှာများကို, နောက်ခံကုဒ်, ဆိုက်ပါဝင်နိုင်သို့မဟုတ်အခြားဉာဏပိုင်ဆိုင်မှု, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်သမျှမဆိုအသုံးပြုရန်. ဒီပြဌာန်းချက်၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာအတိအကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်, ဧည့်သည်များ၏ပိုင်ရှင်များလျော်ကြေးပေးဖို့သဘောတူ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် AUD ၏ပမာဏအတွက်အရည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ. $100,000, သို့မဟုတ်, ကတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်လျှင်, ဒီပြဌာန်းချက်၏ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုမဆို. သူသို့မဟုတ်သူမကဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလက်ခံရယူသုံးတဲ့အခွအေနေကြောင်းနားလည် visitor ရမ်း မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် လက်ခံမှုပါဝငျ.
WEBSITE OR သုံးစွဲဖို့အခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှု, ရောင်းချမည်, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏မာတိကာ Publish
အဆိုပါ website နှင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရနေကြတယ်. အဆိုပါ website တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ယူဆခြင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ရပါမည်. ဧည့်သည်ထို site content ကိုအတွက်သမျှမျှအခွင့်အရေးရှိသည်. ဒါကြောင့်အမြန်စာချုပ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုမဟုတ်လျှင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောဖြစ်ပါသည်.
site ကိုမှ hyperlinks, CO-BRAND, "frames" AND REFERENCING SITE ကိုတားမြစ်ချက်
ဖော်ပြက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်လျှင်, အဘယ်သူမျှမကဤ site ကို hyperlinks စေခြင်းငှါ, ၎င်းသို့မဟုတ်ဝေမျှ, (အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, logotypes, အမှတ်တံဆိပ်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်း) သူတို့မှမဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ထို့အပွငျ, သင် URL ကိုကိုးကားခွင့်ပြုမထား (က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ) ဤ website သို့မဟုတ်ငါတို့မှ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်မီဒီယာ၌ဤ website ကိုမဆိုစာမကျြနှာ, မဟုတ်သလိုသင် site ကို '' ဘောင် '' ခွင့်ပြုထားပါသည်. သငျသညျအထူးမဆိုဤကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ် de-သက်ဝင်စေဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူ, နှင့်ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုချိုးဖောက်ရာမှပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ်. ဒီပြဌာန်းချက်၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာအတိအကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်, သငျသညျ၏ပိုင်ရှင်များလျော်ကြေးပေးဖို့သဘောတူ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် AUD ၏ပမာဏအတွက်အရည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ. $100,000, သို့မဟုတ်, ကတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်လျှင်, ဒီပြဌာန်းချက်၏ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုမဆို. သင်ကဤပြဌာန်းချက်လက်ခံရယူသုံးတဲ့အခွအေနေကြောင်းသိနားလည်ကြောင်းခိုင်လုံ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် လက်ခံမှုပါဝငျ.
site ၏ content များအတွက် Disclaimer
မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် မှာပေါ်ထွန်းအကြောင်းအရာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူပါ, အပေါ်ချိတ်ဆက်, သို့မဟုတ်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်. ဧည့်သည်များကြည့်ရှုရန်နှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးအန္တရာယ်ယူဆ, စာဖတ်ခြင်း, သုံးပြီး, သို့မဟုတ်ဤသတင်းအချက်အလက်များအပျေါမှီခို. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆန့်ကျင်ဖို့အမြန်စာချုပ်မဟုတ်ရင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်, သငျသညျတိကျမှုအဖြစ်ဤနေရာတွင်ပါရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုရန်မပိုင်ခွင့်ရှိသည်. ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအာမခံလုပ်.
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် FOR Disclaimer ဒီနည်းကိုဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ယင်း၏အကြောင်းအရာနှင့်အပြန်အလှန် FROM မှသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် SOFTWARE စေ. ဧည့်သည်ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးအန္တရာယ်ယူဆ, worm, OR အခြားသတင်းများအကျင့်ပျက်ခြစားမှု Factor.
ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာများမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဧည့်ပါသို့မဟုတ်ဧည့်သည်နောက်ပိုင်းတွင်အမှတ်မထင်ဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလွန်ကြောင်းမကောင်းတဲ့ကုဒ်သို့မဟုတ်ဒေတာကနေအတူဆက်သွယ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဆော့ဖ်ဝဲတာဝန်မျှမယူဆ. တစျဖနျ, ဒီဆိုက်နှင့်ဧည့်သည်အမြင်များနှင့် Interactive, သို့မဟုတ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေသို့မဟုတ်တဲ့ pop-ups သို့မဟုတ်ကြော်ငြာပလ္လင်ပြသ, သူ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာ.
Downloads ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေအတွက် Disclaimer
ဒီကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒီ site မှဧည့်သည် downloads, သတင်းအချက်အလက်. ဝက်ဘ်ဆိုက် downloads, မကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာ codes တွေကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအာမခံစေသည်, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, virus နဲ့ worm.
ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်, သုံးပြီး, သို့မဟုတ်ဤဆိုက်နှင့်မဆိုထုံးစံ၌အပြန်အလှန်, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေအပါအဝင်, ကြော်ငြာ, သို့မဟုတ်ပါ pop-ups, downloads,, နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအခွအေနေသကဲ့သို့မိမိအပျသညျဟုကြည့်ရှုခွင့်ပြု, ဧည့်သည်အစဉ်အမြဲမဆိုဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အတွက်ရရှိလာတဲ့ဆိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်ပေါ်တွင် အခြေခံ. ညာဘက်ကိုမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ဖော်ပြချက်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏တောင်းဆိုချက်များအားလုံးကို waives, အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိမရှိ, ကာလတွင်သို့မဟုတ် unforeseeable, သဘာဝတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရှိမရှိ. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးတာဝန်ယူမှုကိုသငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ paid ပမာဏထက်မပိုပါလိမ့်မယ်, ဤချန်လှပ်ဘို့ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါမဆိုတရားစီရင်မှုများအတွက်, ရှိလျှင်, ကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်.
ထို့အပြင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခံထိုက်ပေကိုင်ဖို့မသဘောတူ, ကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမ, ဘုရားသခငျ၏လုပ်ရပ်များ, စစ်, အကြမ်းဘက်ဝါဒ, ပုန်ကန်, အဓိကရုဏ်း, ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, သဘာဝဘေးဒဏ်, ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အဦများပြတ်တောက်, အလုပ်သမားရှားပါးမှုသို့မဟုတ်ပြတ်တောက် (ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောသပိတ်အပါအဝင်), ပစ္စည်းရှားပါးမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းမဟုတ်သည့်နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ.
ဧည့်သည်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ရပ်အတွက်သူကိုအမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီဖြစ်စေသောသဘောတူသို့မဟုတ်၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်, ဧည့်သည်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို indemnify ပါလိမ့်မယ်, နှင့်, သက်ဆိုင်လျှင်, ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုခုခံကာကွယ်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မဆိုတောင်းဆိုမှုများ.
ဧည့်သည်ကြည့်ရှုနေတဲ့အခွအေနေအဖြစ်သဘောတူ, ဧည့်သည်နှင့်အကျဘျဆိုကျအကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ယူဆကြောင်း. အားလုံးတင်ပြ, ၎င်းဝေမျှအပါအဝင်, ဂရပ်ဖစ်ပလ္လင်တွင်ပါရှိသော, တင်ပြချက်များ၏ content ၏သို့မဟုတ်မည်သည့်, အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏သီးသန့်အိမ်ခြံမြေဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အသုံးပြုသောစေခြင်းငှါ, နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, မဆိုမျိုးနောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်. ဧည့်သည်ကိုသာဝက်ဘ်ဆိုက်မှသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သဘောတူ, ထိုတရားသည်အစဉ်အမြဲမထိုက်မတန်ကိုမြင်အတိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစုံတမျိုးအတွက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း. "လကျအောကျခံ" ကိုလည်းသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါသည်.
မဆိုအငြင်းပွားမှု, ထဲကပေါ်ထွက်လာသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာသို့မဟုတ်ပြောဆိုချက်ကို, စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်စာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်., ယင်း၏တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းအပါအဝင်, တရားဝင်မှုသို့မဟုတ်ရပ်စဲ, အဆိုပါ ACICA အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများနှင့်အညီခုံသမာဓိအားဖြင့်ပြေလည်ခံရကြလိမ့်မည်. ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံဘရစ္စဘိန်းဖြစ်ရလိမ့်မည်, သြစတြေးလျ. အဆိုပါခုံသမာဓိ၏သင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ရလိမ့်မည်.
ဤဆိုဒ်ကိုရည်မှတ်မဆိုကိစ္စပညတ်တရား၏တစ်ဦးဝင်းရှေ့မှာခေါ်ခဲ့ရမည်ဆိုပါက, ကြိုတင်- သို့မဟုတ် Post-ခုံသမာဓိ, Viewer ကို, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, စာရင်းပေးသွင်းထားသူသို့မဟုတ်ဖောက်သည်မဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်ဝါးနှင့်လျော်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အတွက်ကြေငြာပြည်နယ်နှင့်မြို့ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူ. တရားဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင့်လျော်သောတရားရုံး၏ပိုင်ရှင်ဖို့အနီးကပ်ဆုံးဖက်ဒရယ်တရားရုံးဖြစ်ရလိမ့်မည် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်'' s ကိုလိပ်စာ.
Viewer ကို, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, စာရင်းပေးသွင်းထားသူသို့မဟုတ်ဖောက်သည်သက်ဆိုင်သောဥပဒရကြလိမ့်မည်လျှောက်ထားခံရဖို့သဘောတူ, အားလုံးကိစ္စများတွင်, ၏ပိုင်ရှင်၏ပြည်နယ်၏ဖြစ် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်.
ဘရစ္စဘိန်း, ကွင်းစ်လန်, သြစတြေးလျ